XtraDeb: Ebe nchekwa PPA magburu onwe ya nke ngwa na egwuregwu maka Ubuntu | Site na Linux
XtraDeb: Nnukwu ihe nchekwa PPA nke ngwa na egwuregwu maka Ubuntu
Ma anyị na- ndị ọrụ nke ụfọdụ ụdị nke Ubuntu, ma ọ bụ ụfọdụ n’ime Mgbasa ozi ewepụtara dị ka Mint ma ọ bụ dakọtara dị ka Debian o MX, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ GNU / Linux Distro, ihe niile Linuxero ị na-achọkarị nke gị Ebe nchekwa ndị obodo weta nsụgharị kachasị dị ugbu a dị ka ọtụtụ ngwa na egwuregwu. Otú ọ dị, nke a abụghị n'ọnọdụ ka n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-agwakarị ya Ebe nchekwa dị na mpụga, dị ka, XtraDeb.
XtraDeb bu nke emere n’oge na-adịbeghị anya Ebe nchekwa PPA maka Ubuntu na nkwekọrịta ma ọ bụ dakọtara, nke na-amalite na-eto eto, gbasaa ma nye ezigbo ngwa na egwuregwu ugbu a.
Ma ha bụ ngwa ma ọ bụ egwuregwu, nwee ha ma jiri ha na ụdị ha kachasị dị ugbu a site na a otu ọwa echichi, dị oke mkpa maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ ịmara na iji ha eme ihe, yana maka mee ka ahuta ihe, nyere aka ma gbasaa ọrụ nke ndị mmepe ya. Karịsịa mgbe Egwuregwu ekwuru ya, ebe obu, obu ebe dị oke mkpa nke anyị ga-emeziwanye mgbe niile Linux.
Maka egwuregwu a kapịrị ọnụ, tupu a gụọ ya tumadi, maka ikpe nke Ubuntu, ewepụtara ma dakọtarana Playdeb, ma dị ka anyị niile maara, otu ugwu ahụ ọtụtụ afọ gara aga, dịka ị pụrụ ịhụ na mbipụta anyị metụtara na isiokwu a.
Ka goodbye ka GetDeb na PlayDeb ... opekata mpe maka ugbu a
Otú ọ dị, anyị nwere mgbe niile oge gboo usoro na-eji nke anyi njikwa ngwugwu inwe ike ime nke anyị GNU / Linux Distros otu Onye egwu egwu. Dị ka ekwuru na post metụtara anyị n'okpuru:
1 XtraDeb: Ebe nchekwa PPA nwere egwuregwu na ngwa emelitere
1.1 Gịnị bụ XtraDeb?
1.2 Etu esi etinye XtraDeb?
1.2.1 Na Ubuntu na ndi ozo
1.2.2 Na Debian na nkwekọrịta
XtraDeb: Ebe nchekwa PPA nwere egwuregwu na ngwa emelitere
Gịnị bụ XtraDeb?
Dị ka anyị kwuru na mbụ, XtraDeb bụ a Ebe nchekwa PPA maka Ubuntu na nkwekọrịta ma ọ bụ dakọtara, nke na-amalite na-eto eto, gbasaa ma nye ezigbo ngwa na egwuregwu ugbu a. Agbanyeghị, na saịtị gị ukara website na LaunchPad, kwuru ihe ndị a gbasara ya:
"Ebumnuche nke oru a bụ ịnye mgbakwunye ngwungwu ngwanrọ (na ụfọdụ mmelite) maka nsụgharị Ubuntu ugbu a ozugbo ha dị. XtraDeb bụ atụmatụ na-akwadoghị nke na-achọ ị nweta nchịkọta ngwanrọ kachasị ọhụrụ maka ụdị Ubuntu ugbu a. Ebe nchekwa XtraDeb na-agbatị nchekwa ndị ọrụ gọọmentị, na-enye nchịkọta ndị ọzọ yana, n'ọnọdụ ụfọdụ, nke kachasị ọhụrụ nke ndị dị."
Onye Okike gị, Jhonny Oliveira, ị na-achịkọta a ezigbo nchịkọta ngwa na egwuregwu n’ebe nchekwa ya, nke na echetara anyị ọtụtụ, ihe furu efu Playdeb. Maka ugbu a, n'ọhịa nke Egwuregwu, kwuru repository na-enye ihe ndị a ndepụta egwuregwu, nke gha gha eto karia oge:
Na ubi nke ngwa ọ na-enye ihe ndị a ndepụta ngwa:
Etu esi etinye XtraDeb?
Na Ubuntu na ndi ozo
Na Debian na nkwekọrịta
Mepụta faịlụ nchekwa maka XtraDeb
Fanye ọdịnaya (ihe ngwanrọ):
Tinye igodo nchekwa
Melite ndepụta nke nchịkọta
Ozugbo emechara usoro ndị a niile, anyị nwere ike ịwụnye nke ọ bụla Ngwa XtraDeb na egwuregwu, na-eburu n'uche na, mgbe ọ na-eme na a Debian Distro na nkwekọrịta, n'ezie, ọtụtụ ngwa ahụ ga-esi ike ịwụnye, n'ihi nsogbu ndabere. N'okwu nke aka m, Egwu obodo egwu 4.3.4 gbasara m GNU / Linux Distro, o nyeghị nsogbu ịdabere na ya.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «XtraDeb», a PPA Repository maka Ubuntu na nkwekọrịta ma ọ bụ dakọtara, nke na-amalite ịmalite, gbasaa ma nye ngwa na egwuregwu dị oke mma ma dịkwa ugbu a; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » XtraDeb: Nnukwu ihe nchekwa PPA nke ngwa na egwuregwu maka Ubuntu
Emelighi Youtube-dl emelitere na repo «ppa: xtradeb / apps», ebe ọ bụ ụdị nke 2020.11.29-1 (maka taa, 08/12/2020, youtube-dl dị na ụdị nke 2020.12.07, nke emelitere tupu); nke a bụ nsogbu n'ihi na youtube-dl ga-anọrịrị oge ọ bụla.
Megamario dị jụụ !!
Zaghachi José juan
Ekele, José Juan. Daalụ maka okwu gị. Olile anya na onye nlekọta gị ga-eleba anya ma melite ngwa gị niile na ịdị uchu.
LibreOffice Office Suite: Otu ntakịrị ihe niile iji mụtakwuo banyere ya
Guix 1.2: Nchịkọta Ngwá Ọrụ Ngwakọta Ngwugwu